branch - Synonyms of branch | Antonyms of branch | Definition of branch | Example of branch | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for branch
Top 30 analogous words or synonyms for branch
မီးရထား လမ်းခွဲရထားများ (Branch lines trains) ဆိုသည်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒေသအတွင်းရှိ ဘူတာရုံနှင့် ဒေသတွင်းရှိ ရထားလမ်းများကို ဆက်သွယ်ပေးထားသောရထား များကိုခေါ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ဘူတာရုံတိုင်း သို့မဟုတ် ဘူတာရုံ အတော်များများတွင် ရပ်နားလေ့ရှိသော ရထားများဖြစ်သည်။
သတင်းတပ်ဖွဲ့ သတင်းတပ်ဖွဲ့(Special Branch)ကို အထက်မြန်မာပြည် တပ်ဖွဲ့ခွဲနှင့် အောက်မြန်မာပြည် တပ်ဖွဲ့ခွဲ များပြန်လည် ပိုင်းခြားထားသည်။ သတင်းတပ်ဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်၏ စစ်ရေးမှတပါး နိုင်ငံရေး လူမှုရေး စီးပွားရေး ဘက်စုံကို ထောက်လှမ်းစုံးစမ်းရသည့်အပြင် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport)ထုတ်ပေးရေး စသည့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရသော ရဲထောက်လှမ်းရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ဟားဘတ် ဟူးဗား သမ္မတရာထူးမှ နုတ်ထွက်သည့်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဟူးဗားအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလောကတွင် တက်ကြွစွာဆက်လက် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ခုနှစ် သမ်မတထရူးမင်းလက်ထက်တွင်လည်း ဥရောပစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်အတွက် ညှိနှိုင်းရေးမှုးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၁၉၄၇-၁၉၄၉တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၅၃-၁၉၅၅ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် Organization of the Executive Branch ကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဆေးပညာဌာနခွဲ (Branch Medical Faculty) တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၈ခုနှစ်တွင် ဆေးပညာဌာန (Faculty of Medicine) အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)(Institute of Medicine, Mandalay)အဖြစ် သီးခြားတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူ(၃၆)ယောက်ကို ဆေးပညာဘွဲ့ (M.B.,B.S.)အတွက် စတင်သင်ကြားပေးသည်။ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို ၁၉၆၈ခုနှစ်တွင် ဇီဝကမ္မဗေဒဘွဲ့လွန်သင်တန်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် Institute of Medicine, Mandalay မှ University of Medicine, Mandalay သို့ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော် စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော် (True Jesus Church)သည် သီးခြားရပ်တည်ေသာ ခရစ်ယာန်ေကျာင်းတော်ဖြစ်ြပီး (တရုတ်)နိုင်ငံ ပီကင်းမြို့တွင် ၁၉၁၇-ခုနှစ်၌ စတင်တည်ေထာင်သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း (၄၅)နိုင်ငံ၌ အသင်းသား ၁.၅-သန်းခန့် ရှိသည်။ ဤကျောင်းတော်သည် ၂၀-ရာစု အစောပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပန်တီကိုစတယ်ေကျာင်းခွဲ (Pentecostal branch of Christianity) အောက်တွင် ရှိသည်။ ခရစ်စမတ်နှင့် အီစတာပွဲတော်များကို ကျင်းပလေ့မရှိပေ။ ကျောင်းတော်သည် ယေရှုသခင် ဒုတိယအကြိမ် ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီ နိုင်ငံအသီးသီးသို့ တရားတော်ကို ဟောကြားဖြန့်ဖြူးရန် ရည်ရွယ်သည်။
ဆာဂေး ဘရင် အတန်းပညာကို မယ်ရီလန်း ရှိ Paint Branch Montessori School တွင် တက်ရောက်သင်ကြား ခဲ့သော် လည်း နောက်ပိုင်း အတန်းပညာကို မယ်ရီလန်း တက္ကသိုလ် မှ သင်္ချာ ပါမောက္ခဖြစ်သူ အဖေက အိမ်တွင်သင် ကြားပေးခဲ့ပြီး သူစိတ်ဝင်စားသော သင်္ချာပညာလည်းကို ပျိုးထောင်သင်ကြားပေး ခဲ့သည်။ ရှရှား ဘာသာ စကားနှင့် ပက်သက်ပြီး သူ့မိသားစုက သင်ကြား ပေးခဲ့ သည်။ ၁၉၉ဝ စက်တင်ဘာတွင် မယ်ရီလန်း၊ ဂရင်းဘဲ့လ် ရှိ Eleanor Roosevelt High School တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပါ့ခ်ကောလိပ်၊ မယ်ရီလန်း တက္ကသိုလ် တွင် စာရင်းပေး သွင်းခဲ့သည်။ ထိုကျောင်း ၌ ၁၉၉၃ မေတွင် သင်္ချာနှင့်ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံ ဘာသာရပ်တွင် B.Sc ဘွဲ့ကို ဂုဏ်ထူးဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။
PHP May 2000 တွင် PHP4 ကို Zend Engine 1.0 စွမ်းအားဖြင့် released လုပ်ခဲ့သည်။ PHP Group သည် အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကို PHP အဟောင်းကနေ update လုပ်ခဲ့ပြီး version4အနေနဲ့ branch များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကာ October 2007 တွင် 4.4.7 အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ PHP4 ဟာ security update များကို 8 August, 2008 အထိဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ 13 July ,2004 တွင် PHP5ကို Zend Engine II စွမ်းအားဖြင့် ထုတ်ခဲ့သည်။ PHP5တွင် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အချို့မှာ
ချန်ဆားမြို့ Changsha () is the capital city of Hunan, in south-central China, located on the lower reaches of Xiang river,abranch of the Yangtze River. Its municipality covers an area of 11,819 sq. kilometers and, according to the 2010 Census,apopulation of 7,044,118 inhabitants.